Munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka Xukuumada oo Muqdisho lagu qabtay & RW Khayre oo ka qeyb galay – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray December 2, 2017 January 19, 2018
Munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka Xukuumada oo Muqdisho lagu qabtay & RW Khayre oo ka qeyb galay
Munaasabad lagu soo bandhigayey waxqabadka Xukuumadda iyo Geedi socodka hanaanka dowladda ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho, waxaana ka qeyb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta Qaranka oo uu ka mid ahaa Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Kheyre oo ka hadlay Munaasabaddan ayaa si qoto dheere uga waramay waxyaabihii ka qabsoomay mudadii uu xilka hayey gaar ahaan dhinacyada aminga, Waxbarashada, Maaliyadda, Socdaalka, Qorshaha Qaranka iyo Arimaha bulshada.
“Dadkii soo qaban-qaabiyay Munasabaddan qiimaha badan mahad celin iyo amaan bey mudan yihiin, qaar ka mid ah Golaha Wasiirada ee halkan ku soo bandhigaya waxa u qabsoomay waxay qeyb ka tahay isla-xisaabtanka, Wasiirada kale ee meesha ka maqan bisha soo socota ayaa iyagana halkan la keenayaa, amniga waxbadan ayaa laga qabtay waxna wey ka harsan yihiin tan iyo bishii Janaayo mushaharaadka shaqaalaha waan bixinay waana wax cusub muddo ka badan 27 sano” ayuu yiri Raisul wasaaraha Somalia.
Waxaa uu sheegay in xukuumadiisu dadaal ugu jirto sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka, si dowladu isugu filnaato, isagoo in Xukuumadda ay wado dadaal lagu dhisayo Ciidan Qaran oo hanta Amaanka guud wadanka si looga maarmo ciidamada AMISOM.
“Waxaan dadaal ugu jirnaa sidii loo heli lahaa Ciidan Qaran oo tayo leh waxaana ku guuleysanay inaan ciidanka u tirino hal hal, haddii ciidan Qaran la helo waxaa imaanayo in lahelo Amaan lagu heli karo Cadaalad is doorasho magaalo ilaa tuulo iyo in loo tartamo xisbiyo” ayuu yiri Mudane Xasan Cali Kheyre oo si qoto dheer ugu dheeraaday waxyaabaha u qabsoomay iyo qorshaha xukuumadiisa.
Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa goobta ku soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay tan iyo Markii la magacaabay iyo howlaha u qorshayeysan xiliga dhow taasoo si weyn looga wada maqsuuday.
Qormadii HoreHore Shirkii Golaha Wasiirada oo lagu soo bandhigay magacyada xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la qabtay
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Khayre: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiqii saxda ahaa ee dib-u-dhiska”